Xuuthiyiinta Yemen oo ogolaaday xabad joojin! – Radio
Xuuthiyiinta Yemen oo ogolaaday xabad joojin!
November 20, 2018	50	Like
Maleeshiyaadka shiicada ah ee dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin xabad joojin isla markaana balanqaaday inay joojiyeen gantaaladii iyo duqeyntii kale oo ay la beegsan jireen Sacuudiga iyo Xulafadiisa.
Go’aanka xabad joojinta ah ee Xuuthiyiinta ayaa lagu dhawaaqay xili uu dagaal culus ka socdo magaalada Xudeydah oo maalmihii lasoo dhaafay ku dhinteen boqolaal dad ah.
Xuuthiyiinta ayaa sheegay in tilaabadan ay doonayaan inay Beesha Caalamka ugu muujiyaan inay dhankooda kasoo horjeedin waan waanta nabada, waxayna sheegeen in Sacuudiga uu yahay kan weli sii wada dagaalka iyo duqeynta.
“…Maadaama Sacuudiga uu mudooyinkii danbe mar-marsiinyo ka dhigtay in duqeynta iyo gantaalada Xuuthiyiinta ay sabab u tahay duulaanka uu ku hayo wadanka Yemen ayaan waxaan go’aansanay inaan dhankeena joojino duqeynta aan ku wadnay Sacuudiga si ay u cadaato cida duulaanka wada….” ayuu yiri Maxamed Al Xuuthi oo kamid ah hogaamiyayaasha xuuthiyiinta oo xiligan cadaadis militari kala kulmaya xulafada Sacuudiga oo la wareegay qeybo kamid ah nawaaxiga magaalada Xudeydah.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa todobaadkii hore sheegtay inay aqbashay mid kamid ah sharuuda Xuuthiyiinta horey ugu xireen wadahadalka nabadeed oo ay Qaramada Midoobay wado, sharuudaasi oo ahayd in maleeshiyaadka dhaawaca ah ee Xuuthiyiinta dibada loogu qaado, gaar ahaan dalka Cumaan.
Waxaanse weli cadeyn in Sacuudiga uu xiligan Aqbali doono xabad joojintan iyagoo dadaal ugu jira inay la wareegaan magaalada Xudeydah iyo dekkada weyn ee ku taal kahor intaan la gaarin shirka ay Qaramada Midoobay qaban-qaabineyso dhamaadka sanadkan.
Gaalkacyooo ay ka bilaabatay dhalinyaro koox koox isku laynaysa. (Dhagayso)
Magaalada Gaalkacyo waxaa kusoo badanayay mudooyinkii danbe dhalinyaro koox koox u socota oo dhibaataynaysa bulshada ...